Tag: fotoana tsara indrindra handefasana | Martech Zone
Tag: fotoana tsara indrindra handefasana
Elokenz: avereno am-pahalalana ny atiny fampisehoana tsara indrindra amin'ny tranokalanao amin'ny media sosialy
Talata, Desambra 1, 2020 Talata, Desambra 1, 2020 Douglas Karr
Ny mpivarotra dia mamorona voajanahary ary mino aho fa indraindray dia manimba ny asany izany. Zavatra iray izay ampahatsiahiviko ahy hatrany amin'ny lahatsoratro. Matetika aho no milentika lalindalina kokoa amin'ireo fitaovana sy paikady… ary hadinoko fa misy mpitsidika izay tsy niaraka tamin'ity dia ity niaraka tamiko. Ho an'ny orinasa, fanaraha-maso goavambe io. Rehefa manohy mamolavola sy mamoaka votoaty izy ireo dia adinon'izy ireo fa misy olona sasany mety tsy mitovy akory
Izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny "fotoana tsara indrindra"
Alahady, Jona 28, 2015 Alahady, Jona 28, 2015 Douglas Karr
Raha tsy mizara sary vaovao tsara indrindra mihitsy aho dia faly aho fa ity no farany. Ary manantena tokoa aho fa hizara izany koa ianao. Misento mafy aho isaky ny mahita fotoana mety indrindra hijerena sary. Fotoana tsara indrindra handefasana tweet. Fotoana tsara indrindra hanavaozana amin'ny Facebook. Fotoana tsara handefasana mailaka. Fotoana tsara indrindra hanavaozana an'i LinkedIn. Fotoana tsara indrindra hanaovana bilaogy. Argh… tena lasa adala tanteraka aho. Isaky ny misy mizara iray amin'ireo
Sunday, June 28, 2015 Sunday, June 28, 2015
Fomba fanao tsara indrindra ho an'ny endrika fanavaozana ny post sy ny status
Alatsinainy, 9 Jona, 2014 Alatsinainy, Aogositra 24, 2015 Douglas Karr
Tsy azoko antoka fa nantsoiko ity sary ity Ahoana ny fomba hamoronana lahatsoratra tonga lafatra; na izany aza, manana fanazavana mazava momba ny fomba fanao tsara indrindra amin'ny fanavaozana ny bilaoginao, ny horonan-tsary ary ny satan'ny fiaraha-monina amin'ny Internet izany. Ity no fanitarana fahefatra an'ny infographic malaza - ary manampy amin'ny bilaogy sy horonan-tsary izany. Ny fampiasana sary, antso-na-hetsika, fampiroboroboana ara-tsosialy ary tenifototra dia torohevitra lehibe ary matetika tsy raharahina satria miasa fotsiny ny mpandefa marketing ny atiny. I